Hotlọ ọrụ NH na-ekwupụta ọkwa mbido Middle East
Home » Nkwari akụ na nkwari akụ » Hotlọ ọrụ NH na-ekwupụta ọkwa mbido Middle East
Ugbu a na njedebe ikpeazụ nke mmepe, ụlọ ọhụrụ ahụ a na-ewu 533-isi NH Dubai The Palm ga-emepe ụzọ ya na Disemba.
NH Dubai Nkwụ ahụ ga-abụ onye izizi akara ga-ebupụta na Middle East
Dabere na Dubai's Palm Jumeirah NH Dubai Nkwụ ahụ ga-abụ akụkụ nke asaa Hotel & Apartment
Propertylọ ọhụrụ ga-enye ụlọ nkwari akụ ndị ọbịa na ụlọ iri abụọ na abụọ, na mgbakwunye na ụlọ iri atọ na isii
Hotellọ nkwari akụ a na-atụkwasị obi nke dị elu na nke dị elu, NH Hotels, ga-amalite na Middle East mpaghara mgbe afọ a gasịrị na mwepụta nke NH Dubai The Palm. Ugbu a na njedebe ikpeazụ nke mmepe, ihe ọhụrụ a na-ewu 533-igodo ga-emepe ọnụ ụzọ ya na Disemba.
Dabere na Dubai's Palm Jumeirah, akara ngosi zuru ụwa ọnụ, NH Dubai Nkwụ ahụ ga-abụ akụkụ nke Hotellọ Ahịa & ,lọ asaa, ihe eji eme ihe dị iche iche nke nwere ụlọ ọbịa na ụlọ elu. Willlọ nkwari akụ ahụ ga-adị mfe ịnweta na ogwe osisi nkwụ, dị n'akụkụ nnukwu ụlọ ahịa na Palm na nso Palm Palm na The Pointe, nke malitere n'oge na-adịbeghị anya dị ka isi iyi kasị ukwuu n'ụwa. Ebe nlegharị anya ndị ọzọ dị na Dubai gụnyere Burj Khalifa, Dubai Mall na Dubai Marina dịcha mfe.
Lọ ọhụrụ 14-storey ga-enye 227 ụlọ ezumike na ọnụ ụlọ ndị ọbịa, na mgbakwunye na ụlọ 306 a na-arụzi ọrụ.
NH Dubai Nkwụ bụ nke ezigbo ụlọ na onye ọbịa na-eweta ọbịa bụ asaa Tides, nwere pọtụfoliyo gụnyere Anantara The Palm Dubai Resort na Oaks Ibn Battuta Gate.
Dillip Rajakarier, onye isi oche Minor Hotels, kwuru, sị, “Obi dị anyị ụtọ na anyị na-eweta NH Hotels na Middle East na ịmalite na Dubai dị mma maka ụdị ahụ. Thelọ nkwari akụ ahụ ga-agbakwunye ụlọ ọrụ nke ụlọ nkwari akụ ndị dị obere Minor na-arụ ọrụ n'ime obodo, n'akụkụ Anantara, Avani na Oaks, na-agbasawanye onyinye dịịrị ndị ọbịa anyị. Anyị na-atụ anya ịkpọbata ụlọ oriri na ọ excitingụ thisụ ọhụrụ a na ahịa na-arụ ọrụ n'akụkụ ndị mmekọ anyị asaa Tides.
Abdulla bin Sulayem, onye isi oche nke asaa Tides, kwukwara, “Anyị wulitere mmekọrịta chiri anya na Minor n’ime afọ asatọ gara aga, na mbido mwepụta nke Anantara The Palm Dubai Resort na 2013. N’ịbụ onye nọ n’etiti akara aka dị elu, NH ga zuo ezu na Anantara na-enye obe-ahia ohere tinyere ise kpakpando Oaks Ibn Battuta Gate Hotel, ọzọ asaa Tides onwunwe nke dị n'okpuru Minor management.
NH Dubai Nkwụ ahụ ga-abụ nke izizi akara ga-ebupụta na Middle East ma sonye na pọtụfoliyo dị ugbu a nke ihe karịrị 240 NH Hotels, nke amara maka ọrụ na akụrụngwa ha. Enwere ike ịchọta NH Hotels na obodo kachasị mma na Europe, na South na Central America na Caribbean, na-ejikọ ndị ọbịa na isi ụlọ ọrụ na oge ezumike.